FAQ -7- Learn English The Smart Way
​ဖြေ......နှစ်ခုလုံးက ဧည့်သည် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Visitor ဆိုတာ
ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်သွားရောက်တာကိုခေါ်ပါတယ်။ Visitor ဆိုတာ သိချင်လည်း
Guest ဆိုတာ......မိမိနဲ့သိလို့ ၊ ပတ်သက်လို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့သူကိုခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ...မောင်ဘ က ကိုယ်နဲ့သိတယ်....သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းမရှိပဲ အိမ်ကိုဗြုန်းစား
ကြီး ရောက်လာမယ်ဆို....Visitor လို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်ထားလို့လာတာဆိုရင်
တော့ Guest လို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ စောဒက တက်ပြီး....Visitor house လို့မသုံးပဲ...
Guest house လို့သုံးတာလဲလို့မေးရင်......( Guest House လို့သုံးတာက Customer
ကို လေးလေးစားစားရှိတဲ့အကြောင်း ကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် )
နောက်တစ်ခုက....Visitor ထက် Guest က ပိုရင်းနှီးတဲ့အသွင်ကိုဆောင်ပါတယ်။
​မေး....ဆရာ အကူကြိယာဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား
​ဖြေ........အကူကြိယာဆိုတာ ကြိယာကို ကူညီတာပေါ့..ဆိုပါတော့
eat - စားသည် ...ဒါက ရိုးရိုးကြိယာ...I eat. ကျနော်စားသည်ပေါ့။
I can eat. မှာကြတော့...ကျနော်စားနိုင်ပါတယ် ဖြစ်သွားတယ်.....
I will eat. - ကျနော်စားမယ်။ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားတယ်..ဒီနေရာမှာ
can ဟာ eat ကိုကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်...can ဆိုတာ...အကူကြိယာ။
ထို့အတူပဲ..will ဆိုတာ အကူကြိယာ။ Should, do,did,does, would
may..has , have, had..စသဖြင့်ပေါ့...ဒါတွေကို အကူကြိယာလို့ခေါ်
တယ်။ အကူကြိယာကို သူ့ချည်းသုံးလို့မရဘူး....ကြိယာနဲ့တွဲသုံးရတယ်။
( ကြိယာမပါလည်း ဖျောက်သုံးထားတာလို့မှတ်ယူရမယ် ) ဥပမာ
Can I take it please?
ဒီနေရာမှာ အပြည့်အစုံပြောမယ်ဆိုရင်...Sure , you can take.ဖြစ်တယ်။
I haveacomputer. ( ကျနော့်မှာ ကွန်ပြူတာရှိပါတယ် )...ဒါက have ကို
ရိုးရိုးကြိယာအနေနဲ့သုံးထားတာ။ cat - ကြောင်/ dog - ခွေး။ go - သွားသည်
sleep - အိပ်သည်၊ have / has - ရှိသည် ( ပိုင်ဆိုင်ရှိတာ )...ဒါမျိုးမီးနင်း
အဓိပ္ပါယ်။ I have gotacomputer. အဓိပ္ပါယ်အတူတူပဲ...ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ
have ကို အကူကြိယာအနေနဲ့သုံးထားတာ..နောက်မှာ got ဆိုတဲ့ ကြိယာ
ပါတယ်။ got ဆိုတဲ့ ကြိယာကို ကူညီတဲ့ have အဖြစ်သုံးထားလို့....ဒါကို
​မေး....ဆရာ ''rather be'' ကို မြန်မာလို ဘယ်လို ဘာသာပြန်သလဲ ပြောပြပေးပါအုံး
​ဖြေ.....Rather be ဆိုတာ.....would rather be ( verb ) အသုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါ
would rather အသုံးက ( ဒါလုပ်ရတာထက်စာရင်..ဒါလုပ်ရတာကိုပိုကြိုက်
တယ် ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး ရပါတယ်..အသုံးပုံစံကိုကြည့်ရအောင်.........
I’d rather stay at home than go out tonight.
( ဒီည အပြင်ထွက်ရတာထက် အိမ်မှာနေရတာကိုပိုကြိုက်တယ် )........
I'd rather you stayed at home tonight.
( ကျနော် ခင်ဗျားကို ဒီည အိမ်မှာပဲ နေစေချင်တယ် )။
( ငါမင်းနဲ့ ရှိနေတဲ့အခါ...ပိုနေချင်တဲ့ နေရာမရှိတော့ပါဘူး )..။
​မေး....ဆရာ Idiom, Slang , Phrasal Verb မသဲကွဲဘူး ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျား
​ဖြေ....Idiom ဆိုတာ တင်စားပြောဆိုတာ...မြန်မာလိုမှာ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်
ဆိုတာတွေဟာ အီဒီယမ်တွေဖြစ်တယ်..တကယ်က မျက်နှာကို ရေနဲ့ဆေးကြော
တာ...သွားတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်တာ.....။ Slang ဆိုတာ ဗန်းစကားကိုပြော
တာ...မြန်မာလိုမှာ ယောကျာင်္းလေးကို ( ဘဲ ) ၊ မကောင်းတဲ့မိန်းမကို ( ကြက် ) လို့
Phrasal Verb ဆိုတာ ( ကြိယာနဲ့ ကြိယာဝိသေသန - Adverb
သို့မဟုတ် ၀ိဘတ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် မူလကြိယာထက် အနက်ထူး
သော ပုဒ်စုကိုခေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကြိယာပုဒ်စု ပေါ့။ ဥပမာ
Call on ဆိုတဲ့ ( Phrasal Verb ) ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်...........
Call ဆိုတာ ကြိယာလိုဆို...ခေါ်သည် ၊ ဖုန်းဆက်သည် စသဖြင့်ပေါ့။ သို့သော်
နောက်က on ဆိုတဲ့ ၀ိဘတ်နဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားတယ်။
( တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကို ခနတစ်ဖြုတ်အလည်သွားသည် ) ဖြစ်သွားတယ်။
I would like to call on Isobel white I am in London.
မေး...ဆရာ ခင်ဗျား Future from now နဲ့ Future from past ကိုသိပ်မသဲကွဲလို့ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
​ဖြေ.........( Future from now ) - I have not got much money , so I think
I will stay at home this summer. ( ကျနော့်မှာ ပိုက်ဆံများများမရှိဘူး..ဒါ့ကြောင့်
လာမဲ့နွေမှာ အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ် )....။ လက်ရှိအချိန်ကာလကနေ
အနာဂါတ်ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Tense ကို Present နဲ့ future
ကိုပဲသုံးထားပါတယ်။ have got , will stay.
( Future from past ) - Maung Ba decided that he would stay at home
for the summer. ( အတိတ်ကာလထဲမှာ အနာဂါတ်ကိုရည်ညွန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်
ပါတယ် ).....။ tense ကို အတိတ်များနဲ့သာသုံးထားပါတယ်။ decided , would.
Future from now -----------
- I am not going to say anything about the exam today, because
Future from past
- I wasn't going to say anything about the exam but the students asked me to.
မေး........Due to ကို because of အသုံးနဲ့ အတူတူထားသုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။The flight was canceled due to bad weather.လိုစာကြောင်းမျိုးမှာနားလည်ပေမဲ့Our teacher is due to retire next year. လိုစာကြောင်းမျိုးမှာ နားမလည်တော့ပါဘူးဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ။
​ဖြေ.....Due to ကို Because of နဲ့ထားသုံးမယ်ဆို နောက်က Noun လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပါယ်က....မဝေးလှတဲ့ အနာဂါတ်ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလည်း due to ကို
သုံးလို့ရပါတယ်။ သတိထားရမှာက နောက်က verb လိုက်ပါမယ်...ဥပမာ
Having had dinner, I am due to sleep. ( ညစာစားပြီးရင်...အိပ်မယ် )
​မေး.........ပြောင်းလည်းရန် ခက်ခဲတဲ့ ဥပဒေ ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုသုံးပါသလဲ ဆရာ။
​ဖြေ.....တစ်ခါက Time မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ အီဒီယမ်အသုံး တစ်ခုတွေ့ဘူးပါတယ်။ နောက်ထပ်
လည်း တစ်ခြားနေရာများမှာ သုံးတာ နှစ်ခါလောက်တွေ့ဘူးပါတယ်.............။
Hard and fast rules - သဘောကတော့...ပြောင်းဘို့ခက်တဲ့၊ ပြင်ဆင်ဘို့ ခက်တဲ့ ဥပဒေ
There are no hard and fast rules about how much weight you can safely gain in pregnancy.
မေး...........The police is investigating the robbery ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ isကိုသုံးတာ မှားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ.....အဓိက မှတ်သားထားဘို့ဟာက....Police သည် အမြဲတန်း Plural ဖြစ်တဲ့အ
တွက် နောက်က အမြဲတန်း Plural Verb ပဲလိုက်ရပါမယ်....။ are ဖြစ်ရပါမယ်။
Formal ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်း၊ ဘောင်အတိုင်း ပြောဆို
ရေးသား တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ရုံးသုံစာတွေ၊ အတည်အခန့်စာတွေ၊ အတည်အခန့်
လုပ်ငန်းတွေ၊ စာမေးပွဲတွေမှာ Formal နဲ့ပဲသုံးကြပါတယ်။
Informal ဆိုတာ....အများသုံးစွဲတတ်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ စကားပြောဆို
တဲ့အခါမှာ Formal ( 30 % )...Informal ( 70 % ) လောက်နဲ့ပြောဆိုကြတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ Formal , Informal ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတော့..ဥပမာလေးပေါ့။
မနက်ဖြန် အလုပ်လုပ်မယ် လို့ပြောချင်တယ်......
I will work tomorrow. ( ဒါက formal အတိုင်းသုံးလိုက်တာ ) အမေရိကားမှာတော်
တော်များများဟာ အဲဒီလို Tense ပုံစံတွေအစား ( စကားပြောရာမှာ ) I got ကို အရမ်း
သုံးတယ်....သူတို့ပြောမယ် ( I gotawork tomorrow. )....။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
တွေတက်ထားပေမဲ့....သူတို့ပြောတာ နားမလည်ဘူးဆိုတာ...အဲဒီ့ Informal အသုံးတွေ
မသိလို့ဖြစ်တယ်။ စကားပြောတတ်ချင်ရင်...Native တွေဘယ်လိုပြောသလဲ လေ့လာ
အများသူငါကြားမှာ လက့်တွေ့ ( Informal ) ဘယ်လိုသုံးစွဲနေသလဲ လေ့လာပါ။..............
နောက်ဥပမာတစ်ခု.....Let's ဆိုတာ ( စို့ ၊ ရအောင် ) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်..သူ့နောက်က
Verb-1 နဲ့ကပ်သုံးမယ်။ ဒီတော့....အလုပ်လုပ်ကြရအောင်ဟေ့ လို့ ဆော်သြမယ်ဆိုပါစို့
Let's work, Let's work ( အလုပ်လုပ်ကြစို့/ ရအောင် ) လို့ ဘယ်သူမှ မသုံးဘူး..........
Let's go, Let's go လို့ပဲသုံးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရာမှာ သဒ္ဒါ
လုံးလုံးကြီး မသိလို့လည်း မရဘူး ( နည်းနည်းတော့ သိသင့်တယ် )....အများကြီးလည်း
ဘူး။ Informal ကို နားမလည်ရင် စကားမပြောနိုင်ပါဘူး။ သတိတစ်ခုထားဘို့က မြန်မာပြည်ကလေ့လာသူတော်တော်များများဟာ....Informal အသုံးတွေကို သဒ္ဒါပေတံနဲ့သွားသွား
တိုင်းပြီး......သံသယတွေဖြစ်...ချာလပတ်တွေရမ်း မသင်္ကာတွေဖြစ်နဲ့ တော်တော်တော့ ဂွ
ကျတယ်။ ကိုယ်တွေမှာ နေ၀င်မိုးချုပ် မပြောချင်လည်းပြော၊ ပြောချင်လည်းပြော...အမြဲ ထိ
တွေ့နေရတာပါ......Formal , Informal ဆိုတာ ဒါကိုခေါ်ပါတယ်။